Manameloka Ny “Xinjiang Mpampihorohoro” Noho Ny Fanafihana Nahafatesana Olona Tao Kunming i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2014 8:30 GMT
Nilaza ny governemantan'i Kunming fa “ireo hery separista Xinjiang no nitarika ny fanafihana fampihorohoroana niteraka vono-olona tao amin'ny garan'ny fiaran-dalambin'i Kunming.” Namariparitra ny loza ho “fanafihana fampihorohoroana nalamina sy nomanina mialoha” ny sampana fampahalalam-baovaom-panjakana Xinjiang.
29 no namoy ny ainy tamin'ny fanafihana tao Kunming. (Sary avy amin'ny Sina Weibo)
Tsy vao sambany ny sampam-baovaom-panjakana sy ny manampahefana ao an-toerana no namariparitra ireo trangan-javatra mahery vaika ho fihetsika fampihorohoroana. Namadika ny heloka vono-olona ataon'ny olo-tokana ho heloka iombonan'ireo foko vitsy an'isa ity famaritana ofisialy ity ary niafara tamin'ny fanomezana anarana azy ireo ho ahiahiana ho mpampihorohoro. Tamin'ny Oktobra 2013, niantso ny foko Miozolomana Uyghur izay nisy iray nametraka ny fiarany hipoaka tao amin'ny faritra be olona tao amin'ny kianjan'i Tiananmen ho mpampihorohoro mpamono olona ny manampahefana Shinoa. Taorian'ny fifandonana tao Tiananmen, nanamafy ny filaminana tao Xinjiang i Shina.
Tao amin'ny Sina Weibo, nanjary lohahevitra niadian-kevitra be indrindra tamin'ny 2 Mey 2013 ny herisetra tao Kunming. Namariparitra ny antsipirihan'izay zava-nitranga ny sasany tamin'ireo nanatri-maso, na dia efa voafafa haingana aza ny ankamaroan'ireo lahatsoratra.
Olom-pirenena teratany Xinjiang “vicki” nanoratra hoe:
Manam-pahaizana mpikaroka momba ny Media “Du Zijian” nanoratra hoe:
Mpiserasera malaza “Jiazhuang zap niuyue” nanoratra hoe:
Bilaogy Qiwenlv naneho hevitra hoe: